विपद् व्यवस्थापनमा ध्यान देऊ – Chitwan Post
आज वैशाख १२ अर्थात् ०७२ सालको गोरखा भूकम्पले विनाश गरेको कालो दिन । नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भएको त्रासदीपूर्ण दिन । भूकम्पको कल्पना गर्दा पनि थर्थरी मुटु काँप्ने कहालीलाग्दो दिन । ७.६ रेक्टर स्केलको महाभूकम्पका कारण अनाहकमा ८ हजार ९०० मानिसले ज्यान गुमाएका थिए भने ७ हजार मानिस अंगभंग भएका थिए । ६ लाख परिवार घरबासविहीन बनेका थिए । घरबासविहीन बनेका अधिकांश पीडितहरु अझै पुनःस्थापित भइसकेका छैनन् । भूकम्पका कारण भत्किएका निजी, सार्वजनिक र सांस्कृतिक सम्पदा पुनःनिर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले नेपालीलाई गिज्याइरहेको छ । भूकम्पको विनाशले थिलथिलो बनाएको मुलुकमा गतचैत्रमा टोनार्डोले उस्तै विनाश मच्चाउँदा दर्जनौँ मानिस मरे । सयौँ अंगभंग भए भने हजारौँ बिचल्लीमा परे । उक्त हावाहुरीले घरबास उजाड बनाएका बारा र पर्साका जनता भूकम्पपीडितजस्तै त्रासदीपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । भौगोलिक संरचना र जटिल भूगर्वका कारण नेपाल भूकम्पीय जोखिम भएका विश्वका प्रमुख देशमध्येमा पर्छ । नेपालको ८३ प्रतिशत भूभाग हिमाली र पहाडी भागले ओगटेको छ भने विश्वको सबैभन्दा कान्छो चट्टानी पहाड पनि नेपालकै भएको मानिन्छ । भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले नेपाल विश्वमा ११औँ स्थानमा रहँदै आएको छ ।
विडम्बना त के छ भने भूकम्पीय जोखिमको एक नम्बरमा रहेको जापानभन्दा जोखिम व्यवस्थापनका हिसावले अत्यन्त पछाडि रहेकाले नेपाल उच्च जोखिममा रहँदै आएको छ । अझैसम्म नेपालमा भू–उपयोग नीति बनेको छैन । भौगोलिक बनोटको आधारमा संरचना निर्माण गर्ने प्रणाली पनि लागू हुन सकेको छैन । परम्परागत हिसावले जसलाई जुन स्थानमा घर निर्माण गर्न सहज हुन्छ, त्यहीँ बस्ती बसाल्ने संस्कार हाम्रो छ । जसका कारण प्राकृतिक विपत्ति, बाढीपहिरो, डुवानजस्ता समस्यासँग पैठोजोरी खेल्नुपर्ने नियति हाम्रो छ । प्राविधिकरूपमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना पनि सायद ०७२ को भूकम्पले नै पाठ सिकाएको हुनुपर्छ । भूकम्पीय जोखिम कम गर्न नयाँ प्रविधि अपनाउन नसक्दा र घर निर्माणमा अझै पनि ढुंगा–माटो, काठ, बाँसजस्ता निर्माणका सामग्री प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । घर निर्माणमा एकरुपता नहुँदा एकै प्रकारका प्रकोपका घटना कतै प्रलयकारी बन्न पुग्छ भने कतै सामान्य हुन पुग्छ । समुदायले सामना गर्न नसक्ने प्रकोप नै विपद् हो । विपद्लाई कसैले रोक्न सक्दैन । तर, यसको प्रभावलाई भने कम गर्न सकिन्छ ।
नेपाली जनताले भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागी, चट्याङ, हुरीबतास, खडेरी, शीतलहर, हिमताल विस्फोट, महामारी, दुर्घटनाजस्ता प्रकोपको निरन्तर सामना गर्नुपरेको छ । यस्ता प्रकोप आउनुपूर्व नै सम्भावित पक्षकोे लेखाजोखा गरेर विपद्को सामना गर्न क्षमता अभिवृद्धि गर्नु नै विपद् व्यवस्थापन हो । प्रकोप संकेत दिएर आउँदैन । प्रकोप र सम्भावित विपद्बारेमा समुदायस्तरमा समयमै चेतना अभिवृद्धि गर्न सके र पर्याप्त सावधानी अपनाउन सकेमात्र ठूलो जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ । नेपालमा सम्भावित विपद्को जोखिम कम गर्न ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४’ लागू भए पनि समुदायस्तरमा पूर्वतयारीबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सकिएको छैन । फेरि भूकम्प आएमा कसरी जोगिने ? अर्थात् विपद्को पूर्वसावधानी कसरी अपनाउने ? सम्भावित विपद्को जोखिम विश्लेषण कसरी गर्ने ? जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथाम कसरी गर्नेजस्ता विषयमा समुदायस्तरमा विपद् व्यवस्थापनको अभियान चलाउन सक्नुपर्छ । यसमा स्थानीय तहको विशेष भूमिका रहने भएकाले विपद्को समयमा तत्काल आइपर्ने असामान्य परिस्थितिको सामना गर्न आपत्कालीन योजना बनाउनुपर्छ । स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको प्रयोगबाटै विपद् व्यवस्थापन गर्न सकिने भएकाले हरेक स्थानीय तहले पूर्वसतर्कतासहित विपद् व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु जरूरी देखिन्छ ।
बर्सेनि घट्दैछ चितवनमा औलो, यसवर्ष नौ जनामा देखियो : स्वास्थ्य कार्यालय